Sammubani, Author at Ibsaa Jireenyaa - Page 52 of 53
January 30, 2016 Sammubani 14 comments
Jechoota baay’ee google search irratti barbaadaman keessaa tokko ‘Boqonnaa Sammuu’ jecha jedhuudha. Yeroo darbee kutaa lama baase ture. Haa ta’uu malee namoonni garmalee waan barbaadaniif kutaa 3ffaa itti fufu dirqame. Kunoo kutaa sadaffaa dubbisuu itti fufaa. Read more
Aariin amala ilma namaa keessa tokkodha. Wanti tokko yoo badu ilmi namaa ni aaraa,ni gadda. Akkuma wantoonni hunduu daangaa qaban aarii fi gaddiis daangaa qabaachu qaba. Daangaan aarii kan hundaa’u nama aaruu san irratti. Namtichi garmalee aare yoo daangaa darbee ofiis miidhe namoota biroos miidha. Jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti sababa aarii too’achuu dhabuutin rakkoon baay’een uumama. Sababa aarii too’achuu dhabuutin wal ajjeecha fi qabeenya barbadeessun dhufa. Read more
Naannoo gaarii yookiin naannoo namoonni Rabbiin sodaatan jiran keessa waan jiraattaniif of tuuluun of hin gowwoomsine. Bakki gaariin Jannataa caalee eessumaa hin jiruuti. Nabiyyanaa Aadam (AS) wanta namoonni hunduu beekan dhandhamee jira. Read more
January 8, 2016 Sammubani Leave a comment
Jechamoota Abdullah ibn Mas’uud(Rabbiin Isarraa haa jaallatu) keessa tokko, namtichi tokko majliisa(iddoo namoonni walitti qabamanii taa’an) dhufe akkana jedhe,”Ani warroota harka mirgaa keessaa osoo hin ta’in warroota Rabbitti dhihaatan keessaa tokko ta’u barbaada. Abdullah Ibn Mas’uudis akkana jedhe,”Haa ta’uu malee gabrichi yeroo du’ee lamuu akka hin kaafamne kan hawwutu as jira.”(Mataa ofiitin jechuu isaati) Read more
January 2, 2016 Sammubani 2 comments
Aaqilli/qaroon namaa tokko gafa tokko mucaa ofiitin akkana jedhe,”Ilma koo yommuu balaan sitti bu’uu garmalee aarte abdii hin kütin. Kuni dhugumatti Rabbii ofii ilaalchise yaada badaa qabaachutin wal qixxaata. Akkasumas diinaf gammachuu kenna. Namoota birootti hin baacin/itti of hin jajin. Dhugumatti yeroo maraa ani nama tokkotti baacu namni biraas akkasuma natti baaca. Addunyaa tana keessatti namni galte(target) xiyyoota wal duraa duban itti dhufaniiti. Read more
“Guyyaa tokko Umar Ibn Al-Kaxxaab(RA) Abdullah Ibn Mas’uud(RA) waliin halkaniin manaa bahan. Fiimaa ibiddaa fagoo boba’u argan. Ifa ibidda sanii hordofuun mana kurraazin keessaa iftu bira gahan. Yommuu Umar kurraazi(duungoo) manaa iftu argu, manicha seenun namticha dullooma alkooli fi dubartii sirbaa isa bashannansiistu waliin arge. Namtichi odoo of hin beekin Umariin qabame. Umaris ni jedhen,”Wanta qaanessaa hanga halkan kanaa namticha dulloomaa du’a eeggatu irraa arge tokkollee hin jiru.” Read more
Yommuu Sodaa fi Rakkoon Cimu-Kutaa 5
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 3